Imiqathango yobuGcisa yokuvelisa iiringi ezigqwesileyo zokuthwala
Zibhekisa ngantoni ezi zangqa zibonisa? Isangqa sokuthwala sibhekisa kumbhobho wesinyithi ongenamthungo oshushu oshushu okanye oqengqeleziweyo (ebandayo utsale) ukwenza umsesane ojikelezayo oqhelekileyo wokuthwala. Le sangqa elingaphandle kumbhobho wentsimbi yi 25-180mm, kwaye ubukhulu eludongeni 3.5-20mm, nto leyo ezahlulwe int ...
Ngaba iibheringi ezingenayo ioyile ngokwenyani azifuni ioyile yokuthambisa?
Iibheringi ezingenayo i-oyile ziluhlobo olutsha lweebheringi ezifakwe i-lubricated, ezinempawu zeebheringi zentsimbi kunye neebheringi ezingenazoyile. Ifakwe matrix yesinyithi kwaye ithambise ngezinto ezizodwa eziqinileyo zokuthambisa. Inempawu zokuthwala okuphezulu, ukuchasana nefuthe, ubushushu obuphezulu ...
Ngaba uyazi ukuba zithini iindawo iibheringi ngoomatshini? Zibizwa ngokuba “kukutya kwemizi-mveliso” kwaye zisetyenziswa ngokubanzi kumacandelo oomatshini abalulekileyo. Kuba ezi zinto zibalulekileyo zisebenza kwindawo engabonakaliyo, zihlala zingaqondwa ngabantu abangafundanga. Uninzi olungenamatshini ...